कामको अवसर कतार, युएई, कुवेत ३ फरक कम्पनीमा जागिर ? • raradiodarpan.com
कामको अवसर कतार, युएई, कुवेत ३ फरक कम्पनीमा जागिर ?
एउटा कम्पनीको नाम ग्रान्ड हाइपर सेन्ट्रल मार्केट कम्पनी, कुवेत हवाली हो। ग्रैंड एक्सप्रेस, दोहा कतार। ग्रान्ड सिटी मल, युएई शारजाह। कार्य स्थिति मूल्य निर्धारण कार्यकर्ता (इनडोर), सेल्सम्यान लेडी, सेल्सम्यान, क्यासियर, स्टल र मार्केट सेल्सपर्सन हो। यस कम्पनीका कामदार/कर्मचारीहरू सधैं एक टोलीको रूपमा सँगै काम गर्न उत्प्रेरित हुन्छन्।
कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी/कामदारहरूलाई धनको रूपमा हेरचाह गर्ने भएकोले, कामदारहरूले हाम्रो कम्पनीलाई विश्वासका साथ विश्वास गर्न सक्छन्। हप्ताको अवधिमा, त्यहाँ छ कार्य दिन र दिनमा आठ घण्टा काम छ। ओभरटाइम काम पनि उपलब्ध छ र कम्पनी नियम र नियमहरू अनुसार प्रदान गरिनेछ। कम्पनीको नियम र नीति अनुसार बिदा दिइनेछ।
तिनीहरूले तपाईंलाई आफ्ना कर्मचारीहरूको लागि उचित खाना र बास (आवास) उपलब्ध गराउनेछन्। यो स्थिति २ वर्षको सम्झौताको लागि हो। त्यसपछि, आवेदकहरूले थप वर्षको लागि पनि आवेदन दिन सक्छन् यदि तिनीहरूले चाहन्छन्। समान वा समान क्षेत्रमा अनुभव भएका उम्मेद्वारहरूले ठूलो फाइदा पाउनेछन्।
तपाईंले विदेशमा काम गर्न अघि अभिमुखीकरण मार्फत जानुपर्छ विदेशमा रोजगारीको लागि, कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यात्रा गर्नु अघि देश, कम्पनी, र तपाईंले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू होसियारीपूर्वक अनुसन्धान गर्नुहोस्। तपाईंले यसलाई ध्यानपूर्वक पढिसकेपछि मात्र तपाईंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो कागजातको प्रतिलिपि हातमा छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्
एसएमएस पठाउँदा तपाईंलाई कुनै पनि समयमा जानकारी प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ।